Nhau - Kuverenga uye Sarudzo yeRange yeVortex Flowmeter
Kukarukureta uye Kusarudzwa kweRange yeVortex Flowmeter
Iyo vortex flowmeter inogona kuyera kuyerera kwegasi, mvura uye chiutsi, senge kuyerera kwevhoriyamu, kuyerera kwemazhinji, kuyerera kwevhoriyamu, nezvimwe.Miyero yekuyera yakanaka uye iko kurongeka kwakakwira. Iyo ndiyo inonyanya kushandiswa mhando yeiyo mvura kuyerwa mumabhomba mapaipi uye ine yakanaka kuyerwa mhedzisiro.
Chiyero cheyero yeiyo vortex flowmeter yakakura, uye pesvedzero pachiyero idiki. Semuenzaniso, kuwanda kwemvura, kumanikidza, viscosity, nezvimwewo hazvizokanganisa chiitiko chekuyera chevortex flowmeter, saka kugona kwacho kuchiri kwakasimba kwazvo.
Kubatsira kweiyo vortex flowmeter ndiyo yakakura yekuyera renji. Kuvimbika kwakakwirira, hapana gadziriso yemagetsi, nekuti hapana michina zvikamu. Nenzira iyi, kunyangwe kana nguva yekuyera yareba, iyo parameter yekuratidzira inogona kugadzikana. Neinomanikidza sensor, inogona kushanda mune yakadzika tembiricha uye yakanyanya tembiricha nharaunda ine simba kuchinjika Pakati pezviridzwa zvakafanana zvekuyera, iyo vortex flowmeter ndiyo sarudzo yakanaka. Zvino, mafekitori mazhinji anoshandisa rudzi urwu rwechiridzwa kuyera kukosha zviri nani uye nemazvo.
Semuenzaniso: 0.13-0.16 1 / L, unogona kufungidzira bai iwe pachako, kuyera hupamhi hwetatu kona, uye iyo Straw du Hall paramende iri pakati pe0.66-0.23 (yakaverengwa pa0.17).
f = StV / d fomula (1)
f-Carman vortex frequency inogadzirwa kune rumwe rutivi rwejenareta
St-Strohal nhamba (isina nhamba)
V-avhareji kuyerera kwehuwandu hwemvura
d-iyo upamhi hwevortex jenareta (ona iyo unit)
Mushure mekuverenga kuwanda
K: kuyerera kwakaringana
f: Frequency inogadzirwa pane yakatarwa kuyerera chiyero
D: Inoyerera mita caliber
V: kuyerera rate
Vortex flowmeter renji kusarudzwa
Iko basa uye vhezheni yechena simba gudzazwi uye Du simba gudzazwi yeiyo vortex flowmeter akasiyana.
Iyo yekuyera renji yeiyo vortex flowmeter
Gasi Caliber Kuyera yakaderera muganho
(m3 / h) Chiyero chekuyera
(m3 / h) Inesarudzo yekuyera renji
(m3 / h) Kubuditsa frequency renji
Liquid Caliber Kuyera yakaderera muganho
1. Iyo vortex flowmeter ine yakapusa mabasa inosanganisira inotevera paramende sarudzo:
Chishandiso coefficient, diki chiratidzo chakatemwa-chakatemerwa, inoenderana 4-20mA kuburitsa renji, sampling kana damping nguva, kuunganidza kuchenesa, nezvimwe.
2. Uye kuwedzera, iyo yakazara yakakwana vortex flowmeter inosanganisirawo anotevera paramende sarudzo:
Kuyera yepakati mhando, kuyerera muripo kumisikidza, kuyerera unit, kuburitsa chiratidzo mhando, tembiricha yepamusoro uye yakadzika muganho, kumanikidza kumusoro uye kwakadzika muganho, yemunharaunda mhepo mudzvinyiriro, yepakati mwero mamiriro density, kutaurirana mamiriro